Hoggaamiyayaasha madasha wadatashiga oo dhegeysaneysa Guddiga xallinta Khilaafaadka – Codkasoomaalida.com
Hoggaamiyayaasha madasha wadatashiga oo dhegeysaneysa Guddiga xallinta Khilaafaadka	Hogaamiyayaasha madasha-wadda-tashiga Qaran ayaa maanta la filayaa inay warbixin dhameystiran ka dhageystaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka, kaddib markii ay maalmo ka hor laaleen natiijada doorashada 11-kursi.
Guddiga ayaa lagu waddaa in ay warbixin ka siiyaan madasha-wadda-tashiga qaabkii ay u xaliyeen cabashooyinkii hor-yaalay iyo go’aan ka gaaristooda 11-ka kursi.
Danjiraha QM u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa waxaa uu kaga dalbaday Guddiga xalinta khilaafaadka inay sharaxaad dhab ah ka bixiyaan sida lagu xaliyay 13 kursi oo ka mid ahaa 24-kursi oo uu horay Guddiga u sheegay in dacwad adag laga keenay, iyadoo markii dmabe Guddiga uu ku soo koobay dacwadaas 11 kursi oo uu natiijada doorashadooda laalay.
Kulanka madasha ayaa wali lagu soo qaadin in xal laga gaaray muranka ka taagan aqalka Sare ee gobolada waqooyi, iyadoo qodobkan ahaa waxyaabaha keenay in mar kale shir isugu timaado Madasha.
Ugu danbeynti, madaxda Madasha ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan munaasabada dhaarinta Xildhibaanada labada aqal oo diyaar garowgeeda uu ka socdo magaalada Muqdisho, waxaana lagu wadaa in maalinta berri la qabto.
Previous Previous post: The Hottest Hairstyle at Fashion Week Is Not on the RunwaysNext Next post: Gaso, ganuun, Gasiin Q.20aad